Tag Archive for "कर्णाली" - कर्णालीमा निरन्तर वर्षा : आकाशे पानीको भर परेका किसान खेतबारीमा ब्यस्त !
आर्थिक सर्वेक्षण : डेढ दशकमा बाघ र अर्नाको सङ्ख्यामा दोब्बरले वृद्धि !
काठमाडौं । विगत डेढ दशकमा बाघ र अर्नाको सङ्ख्यामा लगभग दोब्बरले वृद्धि भई बाघको सङ्ख्या हाल २३५ र अर्नाको सङ्ख्या ४४२ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को आठ महीनाको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार सन् २००० मा ६१२ गैँडा रहेकामा सन् २०१४ मा ६४५ पुगेको छ । सन् २०१२ मा २८५ कृष्णसार रहेकामा सन १०१३ मा ३०० पुगेको भए पनि त्यसपश्चात् क्रमशः घट्दै गई सन् २०१६ मा २५२ मा सीमित भएको सर्वेक्षणमा जनाइएको छ । त्यस्तै सन्... थप पढ्नुहोस्
कर्णालीका नागरिकलाई शेयर कारोबार गर्न अझै सहज
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरबाट शेयर कारोबार शुरु हुने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पहलमा कार्यालय स्थापना भए पश्चात शेयर कारोबार गर्ने बाटो खुलेको हो । कार्यालय खुलेसँगै कर्णालीका नागरिकलाई शेयर कारोबार गर्न अझै सहज भएको छ । त्यहाँ शेयर खरीद बिक्री गर्न इम्पेरियल सेक्युरिटिज प्रालिको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । कम्पनीले धितोपत्र बोर्डबाट प्राप्त आदेश... थप पढ्नुहोस्
खलङ्गा । भाषा आयोग कर्णालीमा बोलिने खस भाषाको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न जुम्लामा आइपुगेको छ । उक्त आयोगले भाषाविद्को परामर्श लिएर देशभरका भाषाको स्थलगत अध्ययन तथा तथ्याङ्क सङ्कलन जारी राखेको हो । बढीमा पाँच वर्षका लागि कार्यअवधि तोकिएको आयोगले केन्द्र र प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधार निर्धारण गरी सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने र भाषाको संरक्षण, सम्वर्द्धन र विकासका ल... थप पढ्नुहोस्
बर्दिया । बर्दिया जिल्लाको कोठियाघाटस्थित कर्णालीको भंगालो गेरुवा नदीमा आइतबार पौडी खेल्ने क्रममा दुई युवा बेपत्ता भएका छन् । बेपत्ता हुनेमा बाँके कोहलपुरका १९ वर्षीय दीपेन्द्र कार्की र कैलाली लम्कीका १९ वर्षीय प्रज्वल कार्की रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङले बताए । घटनास्थल नेपालकै लामो पुलदेखि करिब ५ सय मिटर उत्तरमा रहेको छ । उनीहरूको उद्धारका लागि प्रजिअ कुरुम्बाङ सहित नेप... थप पढ्नुहोस्
एकातिर कर्णालीमा सँधैजसो अनिकाल हुने अर्कातिर खाद्य संस्थानले कर्णालीबाटै ल्याएको फापर, सिमी जस्ता खाद्यपदार्थ बिक्री वितरण नगरेर कुहिएको छ सञ्चिता पौड्याल काठमाडौं । करिब ४० प्रतिशत नेपाली घरधुरीमा रक्सी पिइन्छ । यसमध्ये २८ प्रतिशत महिलाहरू रक्सी पिउँछन् । गाउँका एकतिहाई महिलाहरू रक्सी पिउँदैनन भने शहरमा त्यो ३० प्रतिशत रहेको छ । शहरिया उच्च र मध्यम वर्गीय आर्थिक हैसियत भएका महिलाहरू धेरैजसो वा... थप पढ्नुहोस्
सुर्खेत । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले नेपालमा गिरिजाबाबुका पालामा आधुनिकीकरणको शुरुआत भएको बताएका छन् । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आज आयोजित पार्टीका कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा नेता डा. महतले विकासको जग कांग्रेस र विशेष गरी गिरिजाबाबुले हालेको दाबी गरे । “मुलुकमा १२ वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व चलिरहेका बेला पनि सरकारमा कांग्रेस थियो”, उनले भने , “कांग्रे... थप पढ्नुहोस्
रमेश लम्साल काठमाडौँ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट ५०० मेगावाट विद्युत् लैजान बङ्गलादेशलाई मार्ग प्रशस्त भएको छ । सो आयोजनाको प्रवद्र्धन भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव जिएमआरले गरिरहेको छ । काठमाडौँमा सम्पन्न नेपाल र बङ्गालदेशका ऊर्जा संयन्त्रको बैठकले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् निर्यातसम्बन्धी सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको छ । गत भदौमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचा... थप पढ्नुहोस्
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले कर्णाली समृद्धिका लागि सहकारी अभियानमा जोड दिइएको बताएकी छन । सुर्खेत लेकबेसी नगरपालिकाको समृद्धि कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको सोमबार नवनिर्मित कृषक तालीम भवनको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सहकारी मन्त्री केसीले सो कुरा बताएकी हुन । सहकारीबिना आर्थिक विकास र स्वरोजगार असम्भव रहेको औँल्याउँदै मन्त्री केसीले भनिन, ... थप पढ्नुहोस्
यी हुन सरकारमा बसेर ठेकापट्टा गर्ने मन्त्री !
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्गबहादुर खत्री ठेकेदार पनि हुन् । उनीसहितको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीले ठेक्का लिएका केही योजना अहिले उनकै मन्त्रालयमातहतमा पुगेका छन् । खत्रीसहितको स्वामित्वको केएसके कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले हाल ६८ करोड ३५ लाख रुपैयाँमा डिभिजन सडक कार्यालय सुर्खेतसँग सम्झौता गरेका ४ योजना निर्माणाधीन छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कात्तिक... थप पढ्नुहोस्